Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ny hetsika virtoaly IMEX dia mandray ireo mpandahateny avy amin'ny IBM, Google ary FERMA
Votoatin'ny orinasa sy ny fikambanana mifantoka amin'ny fiaraha-monina sy fiaraha-monina amin'ny hetsika an-tserasera.
Inona no hitranga amin'ny ho avy amin'ny hetsika ataon'ny orinasa rehefa miala amin'ny areti-mandringana COVID-19 ny firenena sy izao tontolo izao?
Ireo mpandahateny dia hiatrika ny olana toa ny filàna ankehitriny hanarenana sy fanavaozana ny hetsika.
Henoy ny zavatra tokony hodinihina sy izay tokony hatao hiomanana amin'ny fiverenan'ny hetsika mivantana.
Ireo mpikabary avy ao amin'ny IBM, Google, Walmart, ary ny Lloyds Banking Group dia hijery izay hitranga amin'ny ho avy ho an'ny hetsika orinasa ao amin'ny Virtual Exclusively Corporate amin'ny 27 aprily 2021.
Colleen Bisconti, VP Global Conferences & Events ao IBM, no mpiadinika ifotony narahin'ny fifanakalozan-kevitra izay i Colleen no manatevin-daharana an'i Megan Henshall, Global Events Account Manager ao amin'ny Google; Mark Henneberger, fampisehoana VP ary hetsika ao Walmart sy Holly Gaffney, Event Manager & Event Development ao amin'ny Lloyds Banking Group hiresahana ny filàna fanarenana sy fanavaozana ny hetsika ankehitriny.